Amazfit Band 5 dia nambara: Tarika marani-tsaina vaovao manana fizakan-tena 15 andro ary Alexa | Androidsis
Huami dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Smartwatch vaovao Amazfit Band 5Tarika marani-tsaina izay manandanja tena tsara kokoa noho ny Mi Band 5. Rehefa lazaintsika fa tsara kokoa izany dia ho fanatsarana mafy ny bracelet natomboka volana vitsivitsy lasa izay miaraka amina endri-javatra manan-danja
Amazfit Band 5 dia miorina amin'ny kinova iraisam-pirenena Xiaomi Mi Band 5, ny endrika dia mitovy amin'ny tarika, raha ny fahasamihafana dia ampy raha miandry ny hahazo iray ianao. Fantatra fa ho tonga amin'ny herinandro ho avy ny Amazfit GTS 2 sy Amazfit GTR 2, rehefa avy nahalala antsipirihany maro momba ny roa izy ireo.
1 Amazfit Band 5, momba ny tarika vaovao avokoa
Amazfit Band 5, momba ny tarika vaovao avokoa
La Tonga ny Amazfit Band 5 miaraka amin'ny efijery AMOLED 1,1 santimetatra Miaraka amin'ny vahaolana 126 x 294 teboka, zava-dehibe ny manamarika fa mahatohitra vovoka sy rano izy. Izy io dia mampiditra endrika fiambenana mihoatra ny 45, namboarina manokana izy rehetra afaka manana endrika hafa isan'andro, miaraka amin'ny loko sy antsipiriany lehibe.
Ity tarika marani-tsaina vaovao ity dia miaraka amina maody fanatanjahan-tena 11, Sensor sensor PPG ho an'ny tahan'ny fo 24/7, fandrefesana ny saturation oxygen ao anaty rà, fanaraha-maso ny kalitaon'ny torimaso, fanarahana ny tsingerim-bolana, fanaraha-maso ny fihenjanana ary fanazaran-tena.
Tonga ny Amazfit Band 5 miaraka amin'ny bateria 125 mAh izay maharitra 25 andro amin'ny maody fitsitsiana angovo, raha amin'ny maody mahazatra kosa dia mahatratra hatramin'ny 15 andro. Izy io dia manana fanohanana an'i Alexa amin'ny alàlan'ny fampidirana microphone, mahazaka rano 5ATM ary milanja 11,5 grama fotsiny. Mety ho voampanga mitovy amin'ny Xiaomi Mi Band 5 ianao satria izy io no premium amin'ity tarika mahay ity.
SCREEN 1.1-inch AMOOLED (126 x 294 teboka)
BATERA 125 Mah
CONNECTIVITY Fanaraha-maso mozika Bluetooth
FOMBA FANORENANA Maody fanatanjahan-tena 11 - Sensora momba ny tahan'ny fo optika 24/7 PPG - Fandrefesana ny tsiranoka amin'ny oksizenan'ny rà - Fanaraha-maso ny kalitaon'ny torimaso
ASA hafa Fanoherana ny rano 5ATM - Fanohanana miaraka amin'i Alexa amin'ny alàlan'ny mikrôfao - fanoherana ny rano sy ny vovoka
Weight Gramin'ny 11.5
Tonga ny 5 septambra ny Amazfit Band 25 mankany Etazonia ary herinandro vitsivitsy taty aoriana dia mikasa ny hidina any amin'ny firenen-kafa izy, noho izany antenaina fa hiditra ao amin'izy ireo i Espana. Ny vidiny fanombohana dia 45 dolara (eo amin'ny 38 euro eo ho eo ny fiovana). Ny Amazfit GTS 2 vaovao sy Amazfit GTR 2 dia hambara amin'ny herinandro ambony, miaraka amina endrika vaovao maro samy andrasana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ambaratonga ny Amazfit Band 5: Tarika marani-tsaina vaovao manana fizakan-tena 15 andro sy Alexa namboarina
Mitantana klioba 800 avy amin'ny firenena 33 ao amin'ny soccer soccer simulator soccer 2021
Ahoana ny fomba filalaovana ny horonan-tsary amin'ny kalitao avo indrindra amin'ny YouTube amin'ny telefaona Android